Ukuletha e libe isenzakalo esisha ukuba umdlalo yakho evamile Blackjack is Hi Lo Blackjack. Lokhu add-on isici kukuvumela ukugembula ukubaluleka ikhadi lesibili ekuzokukhulunyiswana ngu umthengisi. Ungase anama ukugembula ukuba bube value ephakeme noma value aphansi khadi kuqala. Nakuba lokhu akuthinti umdlalo uqobo, liyanezela on ambikele yakho futhi inesikhala nomthelela obalulekile RTP umdlalo kanye.
Mayelana unjiniyela Hi Lo Blackjack
Lakhiwa NYX-Ongokoqobo, Hi Lo Blackjack kuwumphumela partnership umdlalo ekuthuthukiseni izinkampani ezimbili. Laba bobabili bahlangana ndawonye in February 2015 futhi iye enikeza out the best casino mobile games kusukela ngaleso sikhathi.
Hi Lo Blackjack game yakho evamile ye Blackjack nge twist ezifudumele. Akukho lutho eziyinkimbinkimbi ngalokhu add-on. I Hi Lo ukubheja sici umane unezela fun game. With the evamile onezitezi eziyisithupha amakhadi kanye kubhejwa, the game uya kwi njengoba ubuyokwazi. Khetha chips kuye ukubaluleka ukubheja ufuna ukubeka, futhi ibuye kubhejwa ufisa ukudlala. Once kwenziwe, hit inkinobho Deal ukuze uqale umdlalo.
Hi Lo ungomunye kubhejwa udlala ngesikhathi Blackjack. Lapha, isidlali athole ithuba lokuziphendulela ukugembula on ukubaluleka ikhadi lesibili ukuthi uzobe edonswa nomthengisi emva amakhadi lokuqala Kuye ibekwe phezu kwetafula. Manje, isidlali noma kufanele akhethe eliphezulu kakhulu noma eliphansi, leyo, une ukuqagela ukuthi ngabe ikhadi lesibili kuyoba of noma value ephansi ephakeme ukwedlula ikhadi lokuqala. Uma ukuqagela ngendlela efanele, ke you zuza khokhela it ngokushesha. Kanti omunye lwesigameko ngokuwina yilapho ingqikithi 21 kufezwa ikhadi lesibili uqobo. A Push kwenzeka uma ikhadi kuqala kwakungumfundisi Ace, kanti owesibili futhi libonakala i Ace. Umdlali uyolahlekelwa ukubheja uma ikhadi owesibili Ace ngenkathi owokuqala akuyona, noma uma Ukuqagela ayilungile.
Once ukubheja Hi Lo uphezu, umdlalo ejwayelekile ye Blackjack iyaqala. Ukuthola ingqikithi 21 noma kusisondeza kuba umgomo weSifundo Se-game.
With the RTP of 99.92%, Hi Lo Blackjack yisihumusho okumangazayo Blackjack njalo. Uma nifuna ezinye fun ezengeziwe ozithandayo yekhasino umdlalo wakho, ke lena umdlalo ilungelo imali itshalwa kumasheya ezindawo.